घरको तल्लो छतका लागि कुन बत्तीहरू प्रयोग गर्ने सजाउनुहोस्
मारिया vazquez | 17/07/2021 12:00 | अद्यावधिक गरियो 19/07/2021 08:13 | स्पेसहरू, रोशनी
राम्रो प्रकाश आवश्यक छ हाम्रो घरलाई रमाइलो बनाउन, राम्रो वातावरणको सास लिन। यो कार्यक्षमता प्राप्त गर्न र आराम गर्न हामी प्रत्येक गतिविधिहरू विकास गर्न सक्षम हुन सक्षम हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग एकदम कम छत भएको घर छ भने, तथापि, प्रत्येक कोठाको लागि सही प्रकाश छनौट गर्न गाह्रो हुन सक्छ यदि तपाईंले सुझावहरूको श्रृ of्खलाहरूको अनुसरण गर्नुभएन भने।
कम छतका साथ तपाईले ह्या lamp्गिंग बत्तीहरू प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ जुन कुनै पनि समय धेरै ठूलो वा ठूला हुन्छन्, किनकि त्यसले कोठालाई केवल सानो देखिने बनाउँदैन तर निश्चित क्षेत्रमा जाने बाटोमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यसैले, सामान्य सर्तमा, सबैभन्दा उपयुक्त चीज भनेको छतमा संलग्न सानो आकारको बत्तीहरूमा बाजी लगाउनु हो जसले स्वच्छ र अव्यवस्थित स्थान प्राप्त गर्न योगदान पुर्‍याउँछ।
जति धेरै हामी बत्तीहरू चाहान्छौं, यो एक ठाउँ खाली गर्न पर्याप्त छैन। यो विशेष गरी कम छत भएका रिक्त स्थानहरूमा देखा पर्दछ। यसले तपाईंको छनौट सीमित गर्दछ, तर तपाईं निराश हुनुहुन्न। केही प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राख्दै र हाम्रा केही प्रस्तावहरू पढिसकेपछि, तपाईंलाई पहिचान गर्नमा कुनै समस्या हुनेछैन घरको कम छतका लागि कुन बत्तीहरू प्रयोग गर्ने।
हामीले उल्लेख गरेका ती दुई मुद्दाहरू के हुन्? कम छत भएको घर वा कोठाको लागि प्रकाश छनौट गर्दा तपाईंले के सधैं मनमा राख्नुपर्दछ?
विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिन्छ कि कुनै पनि चीज छतबाट झुण्डिएको हुनुपर्दछ भूमिबाट न्यूनतम २ मिटर को दूरी। यी डाटालाई ध्यानमा राख्दै २.2.30० मिटरको छतमा, उदाहरणका लागि हामी केवल c० सेन्टिमिटर उचाई मात्र राख्न सक्छौं। यो समीकरणले अन्तरिक्षको इष्टतम कार्यको ग्यारेन्टी दिन्छ, यद्यपि तपाईले पछि देख्नुहुनेछ, हामी आफैंलाई विशेष स्थानहरूमा अपवाद अनुमति दिन सक्छौं।
उचाइले पनि प्रकाशको घटनाको त्रिज्यालाई असर गर्दछ। अधिक उचाई, अधिक त्रिज्या। कम उचाई, सानो त्रिज्या। त्यसकारण ठूला बत्तीहरू छनौट गर्नुहोस् किरण कोण यो एक ठूलो प्रबुद्ध स्थानको मजा लिन महत्वपूर्ण हुनेछ।
1 पुन: स्पटलाइटहरू
3 आधुनिक झूमर
4 ह्यान्ग बत्तीहरू
5 भुइँ र भित्ता बत्ती
ठाउँ बचत गर्ने र हाम्रो छतलाई उनीहरूको वास्तविकता भन्दा उच्च देखाउनको लागि एउटा रमाईलो तरिका, recessed स्पॉटलाइटमा शर्त लगाउनु हो। यी गलत छतमा इम्बेड गरिएको छ घरको, एक समान प्रकाश ग्यारेन्टी र कोठामा सफा सौन्दर्य प्रदान गर्ने।
यी केन्द्रहरु बीच तथाकथित छन् सब भन्दा चाखलाग्दो डाउनलाइटहरू कम छतका साथ खाली ठाउँहरू प्रकाशित गर्न। जबकि recessed स्पटलाइट्स प्रकाश को एक घन बीम की पेशकश को विशेषता को लागी, डाउनलाइटहरु एक धेरै ठूलो उद्घाटन कोण संग एक विसरित प्रकाश ग्यारेन्टी। एलईडी प्रकाश को विकास संग, एक अधिक प्राकृतिक प्रकाश र एक लामो उपयोगी जीवन पनि प्राप्त गरीन्छ।
छत परिभाषाबाट हुन्छ "पारदर्शी फ्लैट बत्ती, जुन छत नजिक राखिएको छ बल्ब लुकाउन "। अर्को उत्कृष्ट छनौट, त्यसकारण, एउटा कोठा बत्तीमा जहाँ छत ज्यादै कम छ र "सफा" विकल्पहरू छनौट स्पटलाइट्सको लागि किनभने यसले भित्तामा ड्रिलिंग प्वालहरू आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईं एक प्रकारको बत्तीको खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो जुन एकदम थोरै र साधारण स्थापनाको साथमा लगियो भने तपाईंले यो भेट्टाउनुभयो!
बजार मा तपाईं पाउनुहुनेछ विभिन्न शैलीहरूको छत टाइलहरू, त्यसोभए तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ तपाईलाई घरको लागि रुपान्तरण गर्न, तपाईसँग जस्तोसुकै स्टाइल छ। बैठक कोठा र बेडरूम को लागी, छत बत्ती एक सही समाधान हुन सक्छ जब अन्य फर्श-स्थायी समाधान संग मिल्दा। र यदि ठाउँ धेरै ठूलो छ भने, तपाईं जहिले पनि बहुविध प्यानलहरूको लागि विकल्प दिन सक्नुहुन्छ।
यो स्पष्ट छ कि यदि हामीले ज्यादै धेरै बत्तीहरू छोड्ने कुरा गरेका छौं, ए झूमर यो विचार गर्न विकल्प छैन। त्यसोभए हामी के भन्न खोजिरहेका छौं? TO जोडिएको हतियारको साथ धातु छत बत्तीहरू र स्क्रीन, सामान्यतया धातुई।
जोडिएको हतियारको साथसाथै, स्क्रीनहरू पनि सार्न सकिन्छ, छत पनि हेर्दा। त्यसोभए तपाईं मात्र सक्नुहुन्न तपाईंको खाली ठाउँको प्रकाश अनुकूलन गर्नुहोस् नयाँ अवस्थाहरूमा, प्रकाशको बिन्दुहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा जहाँ यो आवश्यक छ, तर तपाईं प्रकाशलाई छतमा डो direct्याउन सक्नुहुन्छ, दृश्य यसलाई बढाउँदै। तिनीहरू बैठक कोठा, भान्छाघर वा सुत्ने कोठाको लागि उपयुक्त छन्, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न?
यसको उचाईमा ध्यान दिनुहोस्। तिनीहरू सामान्यतया and० र c० सेन्टिमिटर बीचको हुन्छ जुन अत्यधिक कम छत वा कोठामा केन्द्रीय स्थितिसँग अयोग्य हुन सक्छ। तपाईं सँधै राख्न सक्नुहुनेछ, हो, सोफामा, ओछ्यान वा टेबलमा; हामी बसेको ठाउँमा।
यदि तपाईं पेंडन्ट बत्तीहरू मन पराउनुहुन्छ तर तपाईंको जीवन को छत कम छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई त्याग्नु पर्दैन। तपाईं तिनीहरूलाई कहिँ पनि राख्न सक्नुहुन्न, तर हो भोजन कक्ष टेबल वा भान्छा टापुमा। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा तपाईं उचाईको अभावको समस्यालाई वेवास्ता गर्नुहुन्छ, जैसा कि हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका छौं आधुनिक झूण्डोको सन्दर्भमा। उचाइ समायोज्य डिजाइनहरू छनौट गर्न प्रयास गर्नुहोस्; ताकि तपाईं सही उचाईसँग खेल्न सक्नुहुनेछ र सबै विवरणहरूको ख्याल राख्न सक्नुहुन्छ।
भुइँ र भित्ता बत्ती
यदि तपाईंको घरको छत पनि कम छ भने, तपाईं छत बत्ती बाल्न सक्नुहुन्थ्यो र फर्श बत्ती, टेबल बत्ती वा भित्ता sconces प्रयोग। समय सफा राख्ने यो उत्तम तरिका हो, जसले तिनीहरूलाई अग्लो बनाउँदछ, र यी तत्वहरू मार्फत ठाडोपनलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
मेहराब बत्तीहरूले प्रकाश कुनै पनि कुनामा पुग्न अनुमति दिन्छ र त्यसो गर्नुहोस् भित्ता हतियारको साथ भित्ता फ्लेक्सहरू। विभिन्न प्रकारका बत्तीहरू सँगै मिलेर प्रत्येक कुनालाई उचित रूपमा उज्यालो पार्न मद्दत गर्दछ यसमा सामान्यतया गरिने गतिविधिलाई। एक विसरित प्रकाश आराम क्षेत्रहरूमा वातावरण सिर्जना गर्न आदर्श हो, जबकि कार्य ठाउँहरूमा प्रत्यक्ष र गहन प्रकाश आवश्यक हुनेछ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यति सजिलो र सरल सुझावहरूको यो श्रृंखलाको साथ तपाईं घरको कुनै पनि कोठा बत्तीमा प्रकाश दिन तपाईंलाई कुनै समस्या हुनेछैन, यद्यपि छत पर्याप्त उचाइमा छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » रोशनी » घरको कम छतका लागि कुन बत्तीहरू प्रयोग गर्ने
यो गर्मी मा नवीकरण गर्न किन धेरै राम्रो छ